Online ပွိုငျပှဲအဖွဈ ပွောငျးလဲကငျြးပမယျ့ ESL Los Angeles Dota2 Major – Gaming Noodle
၂၀၂၀ မတျလ ၁၅ ကနေ ၂၂ အတှငျး ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားခဲ့တဲ့ ESL Los Angeles 2020 Dota2 Major ဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပွနျ့ပှားလာမှုကွောငျ့ မတျလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ ရှဆေို့ငျးခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲကို ပွနျလညျ ကငျြးပမယျ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို မကွာခငျကွညောသှားမယျ့လို့ ဆိုထားခဲ့ပမေယျ့ ယခုလို ၂ ပါတျခနျ့ကွာမှ သတငျးထုတျပွနျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာတဝနျးမှာလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပွနျ့ပှားမှု မငွိမျမသကျ ဖွဈနသေေးတာကွောငျ့ ESL က 2019-2020 Dota Pro Circuit ရဲ့ တတိယမွောကျ Major ကို Online ပွိုငျပှဲအနနေဲ့သာ ကငျြးပတော့မယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ စတုတ်ထမွောကျ DPC Minor နဲ့ Major ကို ဖကျြသိမျးလိုကျတဲ့ သတငျးနောကျမှာ ဒါပထမဆုံး ပွနျကွားရတဲ့ ဒီနှဈ Dota Pro Circuit ရဲ့သတငျးကောငျးပါပဲ။
ESL ရဲ့ တရားဝငျသတငျးထုတျပွနျခကျြမှာတော့ လာမယျ့ မတျလ ၂၈ ကနေ ဧပွီ ၁၉ အထိ အသငျး ၃၄ သငျးမှ ဒသေတှငျး Online League ၅ ခုခှဲပွီး ယှဉျပွိုငျသှားမယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ထို Qualifier မှတကျလာတဲ့ အသငျးတှနေဲ့ Major တကျရောကျခှငျ့ရတဲ့ အသငျးမြား Minor မှ အကောငျးဆုံးအသငျးမြားဟာ ပတျလညျ Bo3 Format နဲ့ ဆုကွငှေဒေျေါလာ ၃၇၅,၀၀၀ အထိပေးအပျမယျ့ ပွိုငျပှဲကို ဆကျလကျယှဉျပွိုငျရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါဆုံးဖွတျခကျြဟာ ကစားသမားတှေ နညျးပွတှေ အသငျးဝနျထမျးတှေ ပရိသတျတှေ ပှဲကငျြးပမယျ့ Crew တှအေတှကျ လုံခွုံမှုရှိပွီး Esports ကို ရှငျသနျနစေမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈတယျလို့ ESL က ရှငျးလငျးခဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ အခကျခဲဆုံးအခြိနျတှမှော အခုလို ဖြျောဖွမှေုပေးနိုငျတာကိုလညျး ပြျောရှငျကွောငျး ESL မှ ရေးသားထားပါတယျ။ အခုလကျရှိမှာလညျး Final ကစားရမယျ့ Tournament အတှကျ စီစဉျနကွေောငျးနဲ့ ပွိုငျပှဲလကျမှတျဝယျယူထားသူမြားကို ငှပွေနျအမျးသှားမယျ့အကွောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ Major ပှဲဖွဈပမေယျ့လညျး DPC Point တှေ ဘယျလိုခှဲဝမေလညျးဆိုတာတော့ မကွညောထားပါဘူး။
ထို့အပွငျ မလေအတှငျး ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားတဲ့ ESL ရဲ့ နောကျထပျပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈတဲ့ ESL One Birmingham 2020 ကိုလညျး Online Tournament အဖွဈပွောငျးလဲလိုကျပွီး တကယျ့ LAN Event ကို 2021 သို့ ပွောငျးရှကွေ့ောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ESL One Birmingham ကိုလညျး ESL LA နညျးတူ ဒသေတှငျး Online League အဖွဈ မလေမှ ဇှနျလအထိ ကငျြးပသှားမှာဖွဈပွီး ဆုကွေးကိုလညျး ဒျေါလာ ၃၃၅,၀၀၀ အထိ ပေးအပျသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Main Event ကို ပွုလုပျတော့မညျမဟုတျပဲ ဆုကွေးကို Online League ၅ ခုကို ခှဲဝပေေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ Quarantine လုပျနတေဲ့သူတှေ Social Distancing လုပျပွီး အိမျတှငျးအောငျးနတေဲ့သူတှေ အမြားအပွားရှိနပေမေယျ့ Esports ကတော့ မရပျတနျ့သှားပါဘူး။ အခုလညျး WeSave! Charity Play နောကျပိုငျး ကွညျ့စရာ မရှိဘူးထငျနတေဲ့ Dota2 ဟာ ပွနျလညျ အသကျဝငျလာပါတောမယျ့။ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ဖွဈပှားနပေမေယျ့လညျး Gaming Noodle ကနေ သတငျးတှနေဲ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျရာ အကွောငျးအရာအသဈတှကေို တငျဆကျပေးသှားဦးမှာမလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွပါ ခငျဗြာ။
Online ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ပြောင်းလဲကျင်းပမယ့် ESL Los Angeles Dota2 Major
၂၀၂၀ မတ်လ ၁၅ ကနေ ၂၂ အတွင်း ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ ESL Los Angeles 2020 Dota2 Major ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားလာမှုကြောင့် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရွေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို ပြန်လည် ကျင်းပမယ့် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မကြာခင်ကြေညာသွားမယ့်လို့ ဆိုထားခဲ့ပေမယ့် ယခုလို ၂ ပါတ်ခန့်ကြာမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှု မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသေးတာကြောင့် ESL က 2019-2020 Dota Pro Circuit ရဲ့ တတိယမြောက် Major ကို Online ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့သာ ကျင်းပတော့မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက် DPC Minor နဲ့ Major ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ သတင်းနောက်မှာ ဒါပထမဆုံး ပြန်ကြားရတဲ့ ဒီနှစ် Dota Pro Circuit ရဲ့သတင်းကောင်းပါပဲ။
ESL ရဲ့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ လာမယ့် မတ်လ ၂၈ ကနေ ဧပြီ ၁၉ အထိ အသင်း ၃၄ သင်းမှ ဒေသတွင်း Online League ၅ ခုခွဲပြီး ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ထို Qualifier မှတက်လာတဲ့ အသင်းတွေနဲ့ Major တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ အသင်းများ Minor မှ အကောင်းဆုံးအသင်းများဟာ ပတ်လည် Bo3 Format နဲ့ ဆုကြေငွေဒေါ်လာ ၃၇၅,၀၀၀ အထိပေးအပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကစားသမားတွေ နည်းပြတွေ အသင်းဝန်ထမ်းတွေ ပရိသတ်တွေ ပွဲကျင်းပမယ့် Crew တွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိပြီး Esports ကို ရှင်သန်နေစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ESL က ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေမှာ အခုလို ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်တာကိုလည်း ပျော်ရွင်ကြောင်း ESL မှ ရေးသားထားပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာလည်း Final ကစားရမယ့် Tournament အတွက် စီစဉ်နေကြောင်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်ဝယ်ယူထားသူများကို ငွေပြန်အမ်းသွားမယ့်အကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Major ပွဲဖြစ်ပေမယ့်လည်း DPC Point တွေ ဘယ်လိုခွဲဝေမလည်းဆိုတာတော့ မကြေညာထားပါဘူး။
ထို့အပြင် မေလအတွင်း ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ESL ရဲ့ နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ESL One Birmingham 2020 ကိုလည်း Online Tournament အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး တကယ့် LAN Event ကို 2021 သို့ ပြောင်းရွေ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ESL One Birmingham ကိုလည်း ESL LA နည်းတူ ဒေသတွင်း Online League အဖြစ် မေလမှ ဇွန်လအထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဆုကြေးကိုလည်း ဒေါ်လာ ၃၃၅,၀၀၀ အထိ ပေးအပ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Main Event ကို ပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးကို Online League ၅ ခုကို ခွဲဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Quarantine လုပ်နေတဲ့သူတွေ Social Distancing လုပ်ပြီး အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့သူတွေ အများအပြားရှိနေပေမယ့် Esports ကတော့ မရပ်တန့်သွားပါဘူး။ အခုလည်း WeSave! Charity Play နောက်ပိုင်း ကြည့်စရာ မရှိဘူးထင်နေတဲ့ Dota2 ဟာ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာပါတောမယ့်။ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ဖြစ်ပွားနေပေမယ့်လည်း Gaming Noodle ကနေ သတင်းတွေနဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါ ခင်ဗျာ။